Football Khabar » डि मारियाले मेस्सीलाई ‘सर्वोत्कृष्ट’ र रोनाल्डोलाई ‘राक्षस’ खेलाडी भनेपछि …….
डि मारियाले मेस्सीलाई ‘सर्वोत्कृष्ट’ र रोनाल्डोलाई ‘राक्षस’ खेलाडी भनेपछि …….
हाल फ्रेन्च क्लब पिएसजीबाट खेलिरहेका अर्जेन्टिनी विंगर एन्जल डि मारियाले आफ्नो देशका सुपरस्टार लिओनल मेस्सी र पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको तुलना गरेका छन् । डि मारियासँग कुनै बेला रियल मड्रिडमा छँदा क्लबमा रोनाल्डो र देशमा मेस्सीसँग एकसाथ सहकर्मी भएर खेलेको अनुभव छ ।
त्यत्ति मात्रै हैन, डि मारियाले विश्व फुटबलका ठूला नामहरू रोनाल्डो र मेस्सीसँगै नेइमार, किलियन एम्बाप्पे, ज्लाटान इब्राहिमोभिचसँग पनि सहकर्मी भएर खेलेका छन् । अर्जेन्टिनी मिडिया ‘टिवाईसी स्पोट्र्स’सँग अन्तर्वार्ता गर्दै डि मारियाले रोनाल्डो र मेस्सीको तुलना गर्दै हाल इटालियन क्लब युभेन्टसबाट खेलिरहेका रोनाल्डोलाई ‘राक्षस’ चरित्रका खेलाडी भनेका छन् भने मेस्सीलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भनेका छन् ।
मेस्सीका ठूला प्रशंसकसमेत रहेका डि मारियाले मेस्सीलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भने । ‘व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि मेस्सी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन्, यो म सधैं भन्छु,’ डि मारियाले भने ।
त्यस्तै, डि मारियाले आफ्ना पूर्वसहकर्मी रोनाल्डोलाई भने ‘राक्षस’सँग तुलना गरे । रोनाल्डो एक पूर्ण खेलाडी, हिम्मत नहार्ने र अन्तिम समयसम्म पनि संघर्ष गरिरहने राक्षसी शैलीका खेलाडी रहेको डि मारियाले बताए । ‘पूर्ण खेलाडी विरलै भेटिन्छन् । रोनाल्डो एक पूर्ण खेलाडी हुन्, जो राक्षसी शैलीका छन् । उनीसँग खेल्दाका मसँग थुप्रै सुन्दर अनुभवहरू छन् । उनी मैदानमा हिम्मत नहार्ने र लडिरहने स्वभावका खेलाडी हुन् ।’
त्यसैगरी, डि मारियाले नेइमार जस्तै अप्ठेरोमा पनि खुसी रहने र सम्झौता गर्न सक्ने खेलाडी रहेको बताए । ‘यहाँसम्मको संगतबाट मैले उनलाई जस्तै घडीमा पनि सधैं खुसी रहने एक खेलाडीका रूपमा पाएको छु,’ डिमारियाले भने ।
डि मारियाले पिएसजीले अझै पनि च्याम्पियन्स लिग जित्नेमा आफू ढुक्क नरहेको बताए । उनले टोलीमा विश्वकै ठूला खेलाडी र नाम भएर मात्रै नपुग्ने बताए । ‘यो प्रतियोगिता जित्न सबै चाहन्छन् । हामी पनि चाहन्छौं । तर, पिएसजीका लागि यो प्रतियोगिता ठूलो चुनौती हो,’ डि मारियाले भने, ‘ठूला उपाधि जित्न टिममा विश्वकै ठूला नामका खेलाडी भएर मात्रै पुग्दैन ।’
त्यस्तै, डि मारियाले अर्जेन्टिनाले यस वर्षको कोपा अमेरिका जित्ने सम्भावनाबारे पनि कुरा गरे । उनले आफूहरूको टोलीमा विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी भए पनि उपाधि जित्न सधैं समस्या हुने गरेको बताए । ‘हामीले पछिल्ला ६ वर्षमा तीन ठूला प्रतियोगिताको फाइनल गुमायौं । यसको अर्थ हामी कमजोर टिम होइनौं । तर, हामीलाई भाग्यले पनि साथ नदिएको हो,’ डि मारियाले भने ।
उनले अघि थपे, ‘यस वर्षको कोपा जित्न सक्ने हामीसँग आधार छन् । यी आधार त गत वर्ष पनि थिए नै । तर, हामी फाइनल पुग्नै सकेनौं । हामी उपाधि जित्छौं भनेर म बाचा गर्दिनँ । तर, हामी उपाधिको खडेरी टार्न कोसिस गर्नेछौं ।’
प्रकाशित मिति १७ माघ २०७६, शुक्रबार १३:३५